May Nyane: အကောင်း အဆိုး သိကြလားဟေ့
“မတရားမှုတခုမှာ သင်ဟာ ကြားနေတယ်ဆိုရင်...
သင်ဟာ ဖိနှိပ်သူဘက်က လိုက်ဖို့ ရွေးချယ်လိုက်တာနဲ့ အတူတူဘဲ”
ဆရာမ ဘလော့ဂ်မှာ တင်ထားတဲ့ ဒက်စ်မွန်တူးတူးရဲ့ အပေါ်က စကားဟာ အဲဒီ တတိယအုပ်စုက သူရဲဘောကြောင်… အချောင်နှိုက်သမားများနဲ့တော့ ကွက်တိပဲ။
Ma, Thanks for sharingagood post.
မြစ်ဆုံ ရေကာတာဆောက်ရေးနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ဥပမာပေးဆွေးနွေးတင် ပြထားတာ သိပ်ကောင်းပါတယ်။ သိပ်ပြီး ဗဟုသုတရပါတယ်။ ဥရောပကို ရောက်တုန်းက မကြာခင် Amsterdam မှာ လေယာဉ်ဆင်းမယ် ဆိုတာ သိရတာနဲ့ အောက်ကိုကြည့်ချလိုက်တော့ တိုက်တာ အဆောက်ဦးတွေနဲ့ ပြည့်နက်နေတဲ့ Amsterdam မြို့ကြီးဟာ အထဲမှာ စပါးတွေ အပင်တွေ ကောက်လှိုင်းတွေ အပြည့် ရှိပြီး ကန်သင်းဘောင်တွေ ခတ်ထားတဲ့ လယ်ကွက်တကွက် ဒါမှမဟုတ် ပစ္စည်း အပြည့်ထည့်ထားတဲ့ လင်ပမ်း တချပ် ရေထဲမှာ ပေါလော မျောနေ သလိုပဲ ထင်ရတယ်။ အခုဒီဆောင်းပါးကို ဖတ်လိုက်လို့ ဒီလိုတာရိုးတွေနဲ့ ဖို့ထားတယ်ဆိုမှ ဒါကြောင့်ကိုး ဆိုပြီး ကျွန်မပိုပြီး သဘောပေါက်သွားပါတယ်။ မြန်မာပြည်သာ Amsterdam လို ပင်လယ်ရေအောက် နှိပ့်သွားရင်တော့ Amsterdam ကို ကာထားသလို တာရိုးတွေနဲ့ ပတ်ပတ်လည် ကာပေးနိုင်တဲ့အင်အား ဘယ်လိုမှ ဖြစ်နိုင်မယ်မထင်လို့ တွေးပြီး တော်တော်ကို စိုးရ်ိမ်မိတယ်။ ကျန်တဲ့ အပိုင်းကိုတော့ ကျွန်မသိပ်မသိ နားမလည်ဘူး။ ဒီဆောင်းပါးကို ရေးတဲ့ ကိုဇော်မင်းကိုရော ပြန်တင်ပြပေးတဲ့ ဆရာမကိုပါ ကျေးဇူးအထူးပဲ တင်ပါတယ်။
ရင်လေးတယ်.. သနားပြီးရင်း သနားနေတော့တာ.. စက်ဆုပ်ပြီးရင်းလည်း စက်ဆုပ်လာပြီ။ ဧရာဝတီကို ကယ်တင်ပါ။
အန်တီရေ.. ဒီအတိုင်းဆိုရင်တော့ မလွယ်ကြောပါလား။ တတ်နိုင်သလောက် ဖြန့်ဝေပေးရုံ၊ နားချအသိပေးရုံကလွဲလို့ ဘာများတတ်နိုင်ဦးမလဲ သားတို့။
Love your post. good writing..
သူတို့တုံးတာများတော့ ဉာဏ်ကို မမီတော့ဘူး။
(တုံးတာရော ဟုတ်ရဲ့လားလဲ မသိပါဘူးလေ)
မ ရေ… 8(
May;Sharingagood post.All for thank ko zaw min and Ma may nyane.
ဘယ်တော့လောက်ဖြစ်မလဲ... ဖြစ်မဲ့အချိန်လေး အနီးစပ်ဆုံးသိရရင်ကောင်းမယ်... ဗီယက်နမ်က ပြောင်းပြေးဖို့...
ရေကာတာဟာစပြီးဆယ်တာနဲ့ ၅-၆လလောက်ရေဖြည့် တဲ့အခါမှာရေဆင်းတာနဲသွားမှာပါ၊ ရေပြည့်သွားရင်တော့ မူလစီးသလောက်ပြန်စီးမှာပါ၊ရေငံတွေဝင်လာမယ်ဆိုတာ တော့နဲနဲစင်းစားဘို့ရှိပါတယ်၊ ရေတွေမဆင်းရင်ဘယ်ရောက်သွားမလဲ။
ကျတော်လဲမြစ်ဆုံကို၎-၅ခါရောက်ဖူးတော့သံယောစင် ရှိပါတယ်၊ ကျောက်တုံးလုံးလုံးလှလှလေးတွေကောက် ခဲ့တာမမေ့ဘူး။ ဒီအလှကိုမပျောက်ပျက်စေခြင်ဘူး။ နောင်လာနောက်သားတွေအတွက်အမွေဖြစ်စေချင်ပါတယ်။
JINGHPAW WUNPAWNG said...
ဒေသခံ ကချင် တွေက တော့ ဒီဗမာတွေဟာ ကချင်တွေကို လူမျိုးတုန်းဖို့ နည်းပေါင်းစုံနဲ့ လုပ်နေတယ်လို့ အသေအချာကို မြင်နေကြပြီ။ တစ်ကွေ့တော့ တွေ့ကြမှာပေါ့ ဆိုပြီး အငြိုးတွေ တိုးနေလေရဲ့။
စိုးဝင်း (တိုင်းမူး) ကပြောသွားသေးတယ်။ မင်းတို့ ကချင်တွေက တောင်ပေါ် နဲ့ပဲဆိုင်တယ်။ အရင်လို လှေကားထစ် စိုက်စားကြတဲ့။ သေချင်းဆိုးနဲ့ သေမယ့် ဗိုလ်ရူး။
တစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက် လေးလေးစားစားနေချင်ပါတယ်။
ဖိနှိပ်သူ ရှိနေသရွေ့ တော်လှန်သူဟာလည်း ကဘာတည်သရွေ့ ရှိနေမှာပါပဲ။ ဆရာ အင်ငိုင်း ဂမ် (Rev. Nngai Gam)
ဥာဏ်ကြီးရှင်ပေပဲ ။ ဥာဏ်မှီ သလောက် စဉ်းစားကြပေကုန် ။